Nootropics PRL-8-53: မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းစွမ်းရည်?
၏ဖောင်းပွ PRL-8-53 တစ် ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်ပြန် 1970 အစောပိုင်းကခြေရာခံ။ အမိုင်နိုအက်တမ် meta benzoic အက်စစ် esters တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ် Creighton တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခနီကိုလတ်ဟန့်စ်ကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းအားတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကဤဖြည့်စွက်ဆေးခန်းမတိုင်မီလေ့လာမှုနှင့်လူသားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့သုတေသနသည်လေ့လာမှုအတွက် PRL-8-53 သည်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်နှင့်နှုတ်အားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်အပြီးသတ်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။
PRL-8-53 သည် FDA ၏ထောက်ခံချက်ကိုမရရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်ယူအက်စ်တွင်အစီအစဉ်မရှိသောဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ PRL-8-53 ကိုသင်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်မ ၀ ယ်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အခမဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
PRL-8-53 သည် benzoic acid နှင့် benzylamine တို့မှဆင်းသက်လာသည်။ သိပ္ပံပညာအရ၎င်းကို 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate) ဖြစ်သည်။
၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းနှစ်များ မှစ၍ PRL-1970-8 သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုအဖြစ်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထောက်ခံတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှိတယ်။ ထို့အပြင် Reddit အပေါ် PRL-53-8 ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ဤဖြည့်စွက်ချက်၏ထိရောက်မှုကိုထောက်ခံသည်။
ပါမောက္ခ Hansl မူလကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် PRL-8-53 nootropic တိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်နှုတ်စာမျက်နှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသည်။
PRL-8-53 ကိုသုတေသနပြုမှုမလုံလောက်မှုကြောင့်၎င်းသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည်လျှို့ဝှက်နက်နဲရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များကမူးယစ်ဆေးသည် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုဆိုသည်။
PRL-8-53 nootropic အလုပ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ဖြစ်သော neurotransmitter ဖြစ်သော acetylcholine ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမြှင့်တင်သည် မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှု.
ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးသည် dopaminergic system ကိုကောင်းမွန်သော dopamine အဆင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေယူထားတာလဲ PRL-8-53 စိတ်ကျရောဂါ မူးယစ်ဆေးဝါး serotonin ၏ overproduction နှောင့်နှေးပါလိမ့်မယ်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အိပ်မပျော်ခြင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုတက်စေသည်။
PRL-8-53 အမှုန့်သည်သိမှုနှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်၊ စကားလုံးများနှင့်ကွဲပြားသောသဘောတရားများကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ခက်ခဲသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှရွက်လွှင့်လိုသောကျောင်းသားများအကြားဖောင်းပွစွာလေ့လာသည့်ဆေးဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုအတွက် PRL-8-53 သည်အထူးသဖြင့်အသစ်သောသဘောတရားများကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားသောအခါအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကဤစမတ်ဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းသည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ ပစ္စည်းအသစ်များအားရှင်းပြရင်းသင်ရုန်းကန်ရန်အလားအလာနည်းပါးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤ PRL-8-53 အကျိုးကျေးဇူးများသည်ရှုပ်ထွေးသောကွမ်တန်ရူပဗေဒစာမေးပွဲများသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ပါးစပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စမ်းရှိသူများအတွက်အရုဏ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
PRL-8-53 သော့ချက်သက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ memory မြှင့်ခြင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါ nootropic သိမှတ်ခံစားမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါသည့် acetylcholine နှင့် dopaminergic စနစ်, activates ။
ကျန်းမာရေးဘာသာရပ် ၄၇ ခုပါ ၀ င်သည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင်ပါမောက္ခ Hansl က PRL-47-8 ကိုသောက်သုံးသူများသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှပါဝင်သူများထက်ပြန်လည်အမှတ်ရခြင်းစမ်းသပ်မှုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းမှတ်ဉာဏ်သည်တစ်ပတ်နီးပါးကြာနိုင်သည်။
လူ့ဘာသာရပ်များကိုမစမ်းသပ်မီ Hansl သည် PRL-8-53 သည်ကြွက်များ၏မှတ်ဥာဏ်ကိုအကျိုးပြုသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်မှုကစိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှုကိုမှတ်မိစေရန်နှင့်ဆက်စပ်ရန် murine model ကိုပြုလုပ်သည်။
Motivation ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး Fatigue ကိုလျှော့ချပေးသည်
PRL-8-53 စိတ်ဓာတ်ကျဆေးသည် dopaminergic ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသည်။ ဒြပ်ပေါင်းသည်လှုံ့ဆော်မှု၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော ဦး နှောက်ဓာတုဖြစ်သည့် dopamine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဥပမာ ADHD နှင့် schizophrenia ကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုတန်ပြန်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။
PRL-8-53 အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်း၊ သင်ဆေးညွှန်းသောက်သောဆေးအတွက်ခွဲခြမ်းဆေးအဖြစ် notropic ကိုမသုံးသင့်ပါ။ ဤဒြပ်ပေါင်းသည်ကုသရန်သို့မဟုတ်ရောဂါကုသရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ပုံမှန် PRL-8-53 သောက်သုံးသော ပါးစပ်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 5mg ခန့်သောက်သည်။ အလုံခြုံဆုံးဆေးပမာဏသတ်မှတ်ရန်သုတေသနအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုသည် 5mg ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အချို့သော PRL-8-53 ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများမှအချို့သော avid သုံးစွဲသူများသည်ဖြည့်စွက်မှု၏ ၁၀ မှ ၂၀ မှ ၂၀ အထိသောက်သုံးကြောင်းအတည်ပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်မှုကိုစီမံနေလျှင်၊ ဥပမာစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုအမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီနှစ်နာရီအလိုအလျောက်အသုံးပြုရန်သေချာစေပါ။
PRL-8-53 nootropic ကိုအမှုန့်၊ ဆေးလုံးနှင့်အရည်ပုံစံများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သင်ဟာတက်ဘလက်ကိုမျိုချခြင်းသို့မဟုတ်သောက်ခြင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ဘယ်ဟာကိုသင့်အတွက်အဆင်ပြေမလဲ သူတော်ကောင်းဘာသာစကားဖြင့်အုပ်ချုပ်မှုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း၊ ဤနည်းလမ်းသည်သင်၏လျှာကိုရေတွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည် PRL-8-53 ကိုနှုတ်ဖြင့်သာနှုတ်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
လောလောဆယ်တွင်စံပြ PRL-8-53 stack ထောက်ခံချက်မရှိပါ။ ဤဒြပ်ပေါင်း၏အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုမသိရှိရသေးပါ။ ထို့အပြင် PRL-8-53 သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရှိပြီး၎င်းကို၎င်းကိုအခြားမှတ်ဉာဏ်အားတိုးစေသော nootropics နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုအကြံပြုသို့မဟုတ်မအကြံပြုသည် PRL-8-53 stack။ အနည်းဆုံးတော့စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အလားတူသက်ရောက်မှုမျိုးကိုသင်မဝံ့ပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ Pern-8-53 အမှုန့်များကို Alpha-GPC, piracetam, IDRA-21 နှင့် theanine တို့ဖြင့်စုဆောင်းခြင်းကသူတို့ကိုအများဆုံးကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများပေးသည်ဟုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းမှအချို့သုံးစွဲသူများက ၀ န်ခံကြသည်။
ယခုအချိန်အထိမှတ်တမ်းတင်ထားသော PRL-8-53 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိသေးပါ။ ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစတင်ကာဆေးနှင့်ကြိုတင်ဆေးခန်းစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူ့လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများသည်တစ်နေ့လျှင် 1970mg ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ဆိုးရွားသောရောဂါလက္ခဏာများမပြခဲ့ပါ။
လက်တွေ့တွင် PRL-8-53 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းဆေးပမာဏနိမ့်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ ကြွက်၏လေ့လာချက်အရ၎င်းဖြည့်စွက်ဆေးပမာဏသည်လှုပ်ရှားမှုကိုအားနည်းစေသည်။
၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ Reddit နှင့် Amazon စတိုးတွင်သုံးစွဲသူအကြိမ်များစွာရှိသည် PRL-8-53 စိုးရိမ်ပူပန်မှု နာမ်။
မှတ်မိရန်သင်ကြားပို့ချသည့်အခါတိုင်း PRL-8-53 ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ အဲဒါကကျွန်တော်ဘယ်လောက်မြန်မြန်မှတ်မိနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေတယ်။ ”
“ PRL နဲ့စကားပြောကျွမ်းကျင်မှုများများလာတာသတိထားမိတယ်။ ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်လေ့လာမှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
"ငါသည်သေးငယ်တဲ့ဆေးများနှင့်အတူစတင်များနှင့်ပိုမိုကြီးမားပမာဏအထိငါ့လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 10mg သည်နေ့စဉ်ဆေးဖြစ်သည်ဟုကျိန်းသေခံစားရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Neuroscience စမ်းသပ်မှုအတွက်သောကြာနေ့တွင် 20mg ကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပြန်လည်မှတ်မိခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကြီးမားသောဆေးများသည်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရာတွင်ကျိန်းသေအထောက်အကူဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်မှုများအတွက်ကြီးမားသောအထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ။ "
“ နံနက်ယံ၌ငါ (နံနက် ၁၁ နာရီ) Noopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine နှင့် tianeptine နှင့်နိုးထသည်။ မိုးသည်းထန်စွာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး…”
“ ကျွန်တော်က IDRA-21 နဲ့ PRL-8-53 ကိုနေ့တိုင်းလုပ်နေတယ်။ ငါ combo ကိုသဘောကျတယ်၊ အဲဒါကအယူအဆအသစ်တွေကိုအလွတ်ကျက်ပြီးနားလည်အောင်လုပ်တယ်။
လူအများစုကလိုပဲဒါဟာအရမ်းကိုအရသာရှိလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Noopept လောက်တော့မဆိုးပါဘူး။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဟာမင်းရဲ့လျှာကိုထုံသွားစေတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးတွေကအရသာထက်သာလွန်တယ်။ ”
“ သေးငယ်တဲ့ဆေးတွေနဲ့တောင်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပျက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်မှတ်ဥာဏ်အနည်းငယ်ပိုဆိုးလာတယ်။ နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့၊
ပါးစပ်နှင့် ၃၀ မီလီဂရမ်အထက်ပါးစပ်နှင့် ၁၅ မီလီဂရမ်အထက်သောက်သုံးသောအခါကျွန်ုပ်၏ခေါင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
PRL-8-53 အမှုန့်သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်လေ့လာခြင်းမပြုရသေးသောအလားအလာရှိသော nootropic ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထိရောက်မှု၏တစ်ခုတည်းသောမြင်သာထင်သာသက်သေသာဓကဆယ်စုနှစ်ငါးခုကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စိတ်အားထက်သန်သောအာရုံကြောဟက်ကာများသည် PRL-8-53 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးရှိသောအစွမ်းထက်သည့်မှတ်ဥာဏ်မြှင့်တင်သူအဖြစ်၎င်းကိုဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်နေကြသည်။
ဒီဖြည့်စွက်ချက်သည်တိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများထံမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်သုတေသနလေ့လာမှုများက၎င်းကိုသေချာစေသည် PRL-8-53 စိုးရိမ်ပူပန်မှု မူးယစ်ဆေးဝါး 200% အထိမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒီ nootropic ၏အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အပြန်အလှန်နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏လုံခြုံမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် PRL-8-53 အစုကိုကြိုးစားခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အခြားဆေးညွှန်းဆေးများနှင့်အတူ PRL-8-53 မသောက်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
သင်သည် PRL-8-53 ကိုအမှုန့်သို့မဟုတ်ဆေးပုံစံဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည် nootropic ဖြည့်စွက်.
Hansl, NR, & Mead, BT (1978) ။ PRL-8-53: စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးအသစ်၏ပါးစပ်ဖြင့်ထိုးသည့်ရလဒ်ကြောင့်လူသားများအားသင်ကြားခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲထိန်းသိမ်းခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) ။
Hansl, NR (1974) ။ အသစ် spasmolytic နှင့် CNS တက်ကြွစွာအေးဂျင့်: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic အက်ဆစ် methyl ester hydrochloride ။
McGaugh, JL, & Petrinovich, LF (1965) ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ Neurobiology ၏နိုင်ငံတကာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
Kornetsky, C, Williams, JE, & Bird, M. (1990) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေး၏အာရုံနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ NIDA သုတေသန monograph ။
Giurgea, C တို့ (1972) ။ ဦး နှောက်၏ပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားမှု၏ဆေးဝါးဗေဒ။ psychopharmacology အတွက် nootropic အယူအဆမှာကြိုးစားမှု။ အမှန်တကယ် Pharmacol (ပဲရစ်) ။
Hindmarch, ဗြဲ (1980) ။ Psychomotor function ကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။
RAW PRL-8-53 ဖုန်မှုန့် (51352-87-5)
2. PRL-8-53 ဆိုတာဘာလဲ။
PRL-4-8 ၏ 53.Benefits
7. PRL-8-53 ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။